13 / 01 / 2018 | RayHaber | raillynews
နေ့: ဇန်နဝါရီလ 13, 2018
တရားဝင်ပြန်တမ်း၏လက်ရှိထုတ်ဝေမှုတွင် 2018 နှစ်ဗဟိုအစိုးရ၏ဘတ်ဂျက်အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာကြေငြာချက်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Communiquéကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်နှင့်အညီအများပြည်သူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသောဝန်ထမ်းများ၏အစားအစာအတွက်အခကြေးငွေများကိုသတ်မှတ်သည်။ တရားဝင်နှင့်စာချုပ်များချုပ်ဆိုထားသော 2018 နှစ် [ပို ... ]
နယူးယောက်ရှိမြေအောက်ရထားလမ်းပေါ်တွင်ရောက်ရှိနေသော 22 နှစ်အရွယ် Rikke Bukh သည်ရထားနှင့်မြို့ရိုးအကြားသောင်တင်နေသည်။ 20 မိနစ်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ထိုမိန်းမငယ်သည်ကယ်တင်ခြင်းရခဲ့ပြီးသူတို့ကိုမြင်တွေ့သူများ၏နှုတ်ကိုနှလုံးသားထဲသို့သယ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ မနေ့ကဒေသခံအချိန်မှာ [ပို ... ]
စီမံကိန်းကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြေယာတိုင်းတာမှုများပြီးစီးခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုနှင့်အတူရထားလမ်းဖြတ်သန်းရန်သိမ်းယူမည့်မြေများကိုလည်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ဒုတိယ ၀ န်ကြီးချုပ် Hakan Çavuşoğluက Gemlik ရထားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိမ်းယူခံထားရတဲ့မြေပိုင်ရှင်များကိုအပေးအယူလုပ်ဖို့ဖိတ်ကြားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ [ပို ... ]
Antalya Tunektepe စီမံကိန်းတင်ဒါရလဒျ
Beydağlarıကမ်းခြေအမျိုးသားဥယျာဉ်တွင်တည်ရှိပြီးTünek Tepe စီမံကိန်းဟုလူသိများသောစီမံကိန်း၏တင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ Talnektepe စီမံကိန်းအားတင်ဒါကြေငြာချက်အား Antalya အတွက်ပိုမိုတန်ဖိုးရှိစေမည့်စီမံကိန်းများထဲမှတစ်ခုကိုယနေ့တရားဝင် Gazette တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Sivas အမြင့်မြန်နှုန်းရထားပို Livable Hale ကယူခဲ့ကြလိမ့်မည်
Sivas အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Davut Gul အမြန်ရထားရထားသည် Sivas ကိုပိုမိုနေထိုင်ရန်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုသူကပြောသည် ဒေသခံအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကျေးရွာများနှင့်ခရိုင်များ၏ Sivas အုပ်ချုပ်မှုပြည်နယ်ညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန [ပို ... ]
Gebze-Halkalı အဆိုပါခရီးသည်လိုင်း၏အဆုံးရောကျခါနီးပွီ။ ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Ahmet Arslan "ဟုအဆိုပါနှစ်ကုန်အထိဖွင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။ မွမ်းမံလေ၏သံလမ်း, အချက်ပြ Gebze ကနေကိုလက်စသတ်နေသည် Halkalı114 မိနစ်သာ။ လိုင်း [ပို ... ]
Lara Cruise နဲ့ဆိပ်ကမ်းမှအရာ Antalya ၏နောက်ကျောမှကုန်တင်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်
Antalya မှ Lara သဲသောင်ပြင်သည် CHP ၏သုတေသနကော်မရှင်မှသင်္ဘောအားဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းအတွက်တောင်းခံကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ CHP Antalya လက်ထောက်ဒေါက်တာ Niyazi Nephi ကော်မရှင်မြေယာများတည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်ပြင်ဆင်အလိုရှိသော resolution ကိုအနည်းဆုံးတူရကီအတွက်သုတေသနပြုခရုဇ် [ပို ... ]
တူရကီ, သမိုင်း၏ Izmir YHT လိုင်း Bit ကြေညာလိုက်သည်လိမ့်မည်!
Ankara İzmir YHT လိုင်းသည်နေ့စွဲအဆုံးသတ်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ထားပြီ။ : 2012 တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Izmir-Ankara အမြင့်တွင်ရှိပြီး 14 နာရီမှ3နာရီအထိ 30 မိနစ်အထိရထားလမ်းကို Ankara နှင့် Izmir အကြားရထားလမ်းကိုလျှော့ချပေးလိမ့်မည်။ [ပို ... ]
Accessibility လက်မှတ်အာဏာပိုင်2Karabükပေးခဲ့ပါသည်
Karabükရှိမသန်စွမ်းသူများအတွက်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ services ၀ န်ဆောင်မှုများပိုမိုရရှိလာစေရန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြဒေသန္တရညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနနှင့် TCDD ဘူတာညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနအားလက်လှမ်းမီမှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားသည်။ မိသားစုနှင့်လူမှုရေးမူဝါဒများ [ပို ... ]
ဘယ်နှစ်ယောက်ခရီးသည် Samsun လေဆိပ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက် 2017 တစ်နှစ်တာဟောငျးကနေန်ဆောင်မှုများ
ဆမ်ဆန်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ကြေညာချက်၊ 2017 သန်း 1 လူသန်းပေါင်း 152 ခရီးသည် 153 ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆမ်ဆမ် - şarşambaလေဆိပ်၌ဝန်ဆောင်မှုရရှိကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ Samsun Çarşambaလေဆိပ် 2017 ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာခရီးသည်များ [ပို ... ]
TCDD5အလုပ်မှာမတော်တဆမှုအပြီး BTS မေးခွန်းများ!
United Transport Workers Union (BTS), Kırklareli TCDD'e မှအဆိုပါမတော်တဆမှုသည်ခွဲရုံ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ယူနိုက်တက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောမတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယူနိုက်တက်Kırklareli TCDD'ya ထရန်စဖော်မာဘူတာရုံ [ပို ... ]
တရား ၀ င်ပြန်တမ်း၏လက်ရှိထုတ်ဝေမှုတွင် Per diem ဥပဒေအထွေထွေကြေငြာချက် (Serial No: 39) ကိုပြင်ဆင်သည့်ကြေငြာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ကြေငြာချက်တွင်မြို့ပြမြူနီစီပယ်မရှိသည့်နေရာများတွင်ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနေရာနှင့်မြို့ပြအုပ်ချုပ်ရေးနေရာရှိပြည်နယ်များရှိပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနေရာလည်းဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဇန်နဝါရီ 13 1931 Ataturk Malatya, မီးရထား ...
ယနေ့သမိုင်းတွင် 13 ဇန်နဝါရီ 1931 Atatürkကရထားလမ်းသည်ရိုင်ဖယ်ထက် ပို၍ အရေးကြီးသောကာကွယ်ရေးလက်နက်ဖြစ်သည်ဟုမာလတီသို့ပြောကြားခဲ့သည်။ “ တူရကီနိုင်ငံသည်အရှေ့ဘက်တွင်ပထမဆုံးလက်မှုပညာဖြစ်သည်။ သူကပန်းပဲဆရာအလုပ်ကိုထပ်လုပ်ပြတာကိုဝါကြွားလိမ့်မယ်။ မီးရထား [ပို ... ]